Dongeng putri salju dalam bahasa Malagasi – qnc jelly gamat asli terbaik
Indray andro tao amin’ny lapa lavitra dia nisy tsara tarehy andriambavy. Tena manja kely izy, miaraka amin’ny manga maso sy ny lava volo mainty. Ny hoditra dia malefaka sady fotsy, ka dia natao hoe Snow White. Snow White manana renikely foana izay saro-piaro amin’ny hatsaran-tarehiny, raha ny rainy no lasa. Ny Renikely loza. Izy nanana ody fitaratra izay mety hoe izay tsara tarehy indrindra ao amin’ny firenena ny vehivavy.
Indray andro, ny renikely nangataka ny majika fitaratra izay vehivavy no tsara tarehy indrindra ao amin’ny firenena. Ny fitaratra majika namaly fa Snow White no vehivavy tsara tarehy indrindra. Ny renikely Dia tezitra indrindra, dia nangataka ny mpanomponao mba manala ny oram-panala fotsy avy amin’izany fanjakana. Ilay mpanompo dia nangataka mba hamono ny oram-panala fotsy ao anaty ala, fa ny mpanompo tsy manao izany. Izy naka ny oram-panala fotsy fotsiny ho any amin’ny hazo sy namela azy ihany, fa ny renikely no tsy mahafantatra fa ny oram-panala fotsy mbola velona.
Ao amin’ny ala, Snow White dia irery sy natahotra. Izy tsy nahalala izay tokony handeha izy. Tampoka teo dia nahita quaint tranokelintsika. Nanontany tena izy izay nonina tao, ary avy eo dia nanapa-kevitra ny hahazo tao an-trano.
Ao an-trano izy, dia nahita 7 kely fandriana sy lakozia. Snow White nanadio ny trano toy ny manasa lamba, nanadio ny fandriana sy ny hafa. Rehefa avy niasa mafy, dia nandeha natory ka nandry tao. Tamin’ny tolakandro, ny fito dwarfs izay nonina tany amin’ny trano rantsan-kazo nandeha nody. Gaga izy ireo nahita nisy tovovavy any. Ny iray tamin’izy ireo namoha azy, ka nanontany hoe iza izy. Snow White tamin’izy ireo ny tantarany mampalahelo. Ary ny fito nahatsapa dwarfs mamindrà fo Snow White dia nangataka azy hitoetra tao aminy tao an-trano.
Raha tao an-dapa, dia nanontany ny majika renikely fitaratra iray indray izay vehivavy tsara tarehy indrindra ao amin’ny fanjakana. Ny fitaratra majika Snow White namaly fa mbola velona ka nitoetra tao an-trano kely miaraka amin’ny fito dwarfs. Izy mbola ny vehivavy tsara tarehy indrindra eto an-tany. Ny renikely Tezitra ary planed zavatra ratsy ho an’ny Snow White.
Dia nanova tarehy renikely ny tenany ho toy ny antitra, izay nivarotra poizina vehivavy paoma ka nankany an-tranon’ny ny botry kely. Talohan’ny ny fito dwarfs nandeha niasa, dia nampitandrina Snow White tsy hanokatra ny varavarana ho olon-kafa. Rehefa tonga ny renikely tao an-trano izy, dia nanomboka Snow White manolotra ny paoma. Snow White Tsy nety namoha ny varavarana fa ny renikely dia nisavika azy. Oram-panala fotsy Nalahelo azy ka namoha ny varavarana. Dia nandray ny paoma avy amin’ny reniny, ary nihinana izany. Rehefa avy nihinana ny poizina paoma, dia reraka sady nahatsapa tamin’ny tany ny poizina paoma teo amin’ny lafiny iray koa.
Tamin’ny hariva, raha ny mofo fito dwarfs tao an-trano, dia gaga nahita Snow White eo amin’ny tany miaraka amin’ny hatsatra tarehy sy ny poizina azy afa-tsy ny paoma. Ary ny fito dwarfs dia mampalahelo ny mahita Snow White izay maty nefa tsy maty. Ary ny fito dwarfs nanapa-kevitra ny hanao tsara tarehy fandriana vita amin’ny kristaly mba Snow White mbola velona.
Andro isan-andro, ny fito dwarfs niandry ny fahagagana ho avy mba Snow White afaka miverina avy any ny reraka. Ary indray andro, nisy ny mpandeha izay raha ny marina dia lohan’ny fanjakana hafa izay hatramin’izao. Nahita vehivavy tsara tarehy teo amboniny fandriana ny kristaly. Nangataka ihany koa ny mpanjaka ny zava-nitranga an-drazazavavy ny dwarfs. Ary ny dwarfs nilaza taminy izay nitranga tamin’i Snow White.
Nandre ny tantara, ny andriana dia tena nalahelo. Ary ho avy ny oram-panala fotsy akaiky kokoa. Nahatsapa miala tsiny ka nanoroka azy. Tampoka teo Snow White tonga. Ny ozona dia tapaka ny mpanjaka ny oroka. Ny dwarfs dia faly. Ary hoy ny mpanjaka nanontany Snow White mba ho tonga tany amin’ny fonenany sy hanambady azy. Farany dia niaina amim-pifaliana mandrakizay taorian’ny.
Tulisan SebelumnyaDongeng putri salju dalam bahasa Latin
Tulisan SelanjutnyaDongeng putri salju dalam bahasa Malta